रिमोट तान्ने बहानामा मैले उसको तिघ्रा छाम्न सफल भएँ र थाहा भयो उसले पेन्टीपनि लगाएकी थिइन - SAMACHAR SANJAL
रिमोट तान्ने बहानामा मैले उसको तिघ्रा छाम्न सफल भएँ र थाहा भयो उसले पेन्टीपनि लगाएकी थिइन
साँझको खाना बनाउन रीनाले पूनः गाउन लगाएर किचन छिरी, म हाफ पेन्ट अनि टि-शर्ट लगाएर टि.भी. हेर्न बसें । नीता पनि कुर्था सुरुवाल लगाएर माथिबाट सलले गला छोपेर टि.भी. हेर्न बसी । साईडबाट नियालेर हेर्दा नीताले ब्रा नलगाएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । मैले उसको तल्लो भाग पनि नियाल्न थालें, मलाई थाहा पाउनु जरुरी भैसकेको थियो कि उसले पेन्टी लगाएकी छ या छैन । धेरै बेरको कसरत पछी पनि पत्ता नलागेपछी म बाथरुम जाने निहुँमा उठें र केहि बेरपछी फर्केर नीतासँगै टाँसिएर बसें । रिमोट तान्ने बहानामा मैले उसको तिघ्रा छाम्न सफल भएँ र थाहा भयो उसले पेन्टीपनि लगाएकी थिइन । रीना पनि खाना पाकिसक्यो भन्दै आई र पसिना पसिना भएको अनुहारलाई कस्तो हपहपी गर्मी भएको भन्दै गाउनको फेद उचालेर अनुहार पुछ्न थाली, त्यसो गर्दा उसको पुती फेरी देखियो र मेरो लाँडो फनफनाउन थाल्यो, नीताका आँखा निकै चौडा भएका थिए । मैले लाँडो सुमसुम्याउँदै भने
“फ्रिजमा बियर चिसो होला लिएर आइज न !” रीनाले नीतालाई सोधी “तँ पनि पिउछेस् बियर ?” “नाई!! मैले त आजसम्म पिएको पनि छैन ।” “वाइन पिउछेस् त ? वाइन त अस्तीनै सँगै बसेर पिएको त हो नि ?” “थोरै ल्याउनु है त ?” मैले रीनाको चलखेल बुझिसकेको थिएं । रीनाले दुई गिलास वाइन र एक बियर गिलास बोतलसहित लिएर आई अनि सोफामा मसँग टाँसिएर बसी । रीना र नीता वाइन पिउन थाले म बियर । जब वाइन गिलासबाट रित्तियो रीनाले फेरी थपी र नीतालाई पनि जबरजस्ती थपिदिई, मेरो पनि एक गिलास बियर सकियो र जब मैले
गिलास भर्न लागेँ रीनाले मलाई जोडले नीतातिर धकेलीदिई र नीताको छातीभरि बियर पोखियो । हत्तपत्त मैले गिलास भुईंमा राख्दै रीनालाई गाली गरें “के गर्छे यो, किन धकेलेको ?” अनि नीताको छातिलाई हत्केलाले टकटक्याएँ । रीना बोल्न थाली “बल्ल बल्ल घरबाट बहिनी आएकी छे सब जना चुपचाप न घरको खबर सोध्नु छ न अरु केही ?” “दिनहुँ त फोनमा गफ हुन्छ, खासै सोधखोज गर्नुपर्ने के नै हुन्छ र?” “अँ खुब! मलाई थाहा छ शैतानको दिमागमा के घुमिरा’छ भन्ने ?” रीनाले फेरी मलाई धक्का दिई र मैले नीताको पोकालाई च्याप्प समाएँ, आहा कति नरम र कोमल थिए उसका पोका । त्यही मौकामा रीना उठी अनि मेरो हातलाई नीताको पोकामाथिनै समाई र झनै
थिचिदिई, नीताको अनुहार रातो र कालो भइरहेको थियो भने रीना हाँस्दैथिई । बल्लबल्ल समाउन पाएको पोका म त्यसै किन छोड्थें र रीनाले यो राम्ररी बुझेकी थिई, त्यसैले उसले आफ्नो हातको वाईनमा धक्का लगाउन मलाई इशारा गरी । “छोड् न के जिस्किरा’को !!!” भन्दै मैले रीनालाई धकेलेजस्तो गरें, उसले फेरी नीताको पोकामै ताकेर मेरो हत्केलासमेतमा पर्ने गरी वाइन पोखिदिई । “भने त भैहाल्छ नि धकेल्नुपर्छ ?” रीना मुस्काउँदै थिई, नीता असमञ्जसमा परेकी थिई के गरौं के नगरौं भन्ने । अचानक रीनाले नीतालाई उठाई र उसको कुर्था माथि सार्दै खोलिदिई । “ओई तेरो ब्रा खोई त ?” “अघि नुहाउँदा भिजाईदिनुभयो नि, अर्को ल्याउन बिर्सेछु, झन अब त कुर्था पनि अर्को छैन !” “के लाज मानेकी दाईसँग पनि याद छ बच्चा बेलामा नाङ्गै मकैबारीमा कुदेको ? बारीको डिलमा पुगेर पुतलीको बिहे गर्दै हनिमुन मनाको… फरक यत्ति हो तेतिबेला तेरो दुध फक्रेको थिएन पुतीमा जाँठा उम्रेका थिएनन् !” “अब पनि… छि !!!”
“त्यस्तो लाज लाग्छ भने त आफू पुरै बिचार गरेर हिँड्नु पर्छ, कहाँ के पर्छ पर्छ के थाहा ? समय परिस्थिती अनुसार मिल्न जान्नुपर्छ नि?” अनि उसका पोका मुसारिदिदैं भनि “राज ! ल भन् त हामी दुईमा कस्को पोका राम्रो ? मेरो की नीताको ?” “अहिले नै भन्नुपर्दा त खुल्ला जसको छ उसकै राम्रो नि ?” “नाटक गर्छ, मेरो कपडा पनि खोल् भन् न ?” अनि आफैंले गाउन खोलेर भुईंमा फाली र खोल केटी यो पनि भन्दै उसको सुरुवालको नाडा खोलिदिई, नीताको सुरुवाल भुईंमा सोहोरियो, त्यसपछी रीनाले मतिर फर्कदैं भनि “किन लाज मानेको तैंले पनि खोल न ?” मैले केहि गर्न नपाउँदै रीनाले मेरो पनि हाफ पेण्ट खोलिदिई र ठन्केको लाँडो समाउँदै भनि “कति ठन्किन्छ यसको लाँडो पनि !!! के बिचार छ केटी चिकाउन मन लाग्या छ भने भन्!!! यस्तो ठूलो लाँडो जहाँतहीं पाईन्न ?” “ल अब भन् कस्को पोका राम्रो ?”
“(रीनाको पोका समाउँदै) पुष्ट अनि कोमल र ठूलो खेलाउन मजा आउने चाँही तेरै छ रीना ? (सहजै नीताको पोका समाएर) नयाँ पोटीलो चिटीक्कको चाँही मेरी प्यारी बहिनी नीताको !!! ल नीता आज चाँही तलाईं म मेरी प्यारी रानी बनाउँकी जस्तो पो लाग्यो हो, के छ बिचार ? (त्यसपछी उसका पोकामा सोझै मुख टाँसेर चुसिदिएँ)” “नाङ्गै पारेर स्तन मुखमा हालेर चुस्दै सन्काएर अनि के छ बिचार भन्नुहुन्छ, तपाईंको नियत त मैले अघि बसमै थाहा पाईसकेको थिए नि, खुब थाहा नपाएझैं गरि मेरो चाक मुसार्दै हुनुहुन्थ्यो, म त दाई-बहिनीमा यस्तो सम्बन्ध राख्नुहुन्न भनेर पो…” नीताले एकैसाथमा सहमति जनाईदिई । त्यसपछी मैले नीतालाई अँगालोमा बाँधेर आफूमा टाँसे अनि एक हातले उसको पूती खेलाउँदै उसको मुखमा मुख जोडेर टङ्ग किस दिन थालें, निकै लामो टङ्ग किस पछी मैले नीतालाई भने “मलाई त नयाँ पूती चाहिएर मात्रै तलाईं पठाउँछु भन्दा हुन्छ भनेको, नत्र यहाँ रीना र मेरो चिकुवा लाईफमा कति मजा थियो कति ?” रीनाले नीताका दुवै
पोका खेलाईदिंदै चुस्न थाली, मैले नीताको कानका लोतीमा किस गर्दै भनें “ओई केटी मेरो लाँडो चुसिदे न त ?” अनि उसको टाउको झुकाएर मेरो काखसम्म पुर्*याईदिँए रीनालाई भनें “रीना! तँ यसको पुती चुस्न थाल्, आज यसलाई सब मजा सिकाउनुपर्छ । यसको पुतीमा म आज रातभरी चिक्छु ।“ नीताले मेरो लाँडो मुखभित्र छिराई र भित्र बाहिर गराउन थाली भने रीना नीताको पुती चुस्न थाली । नीताको लाँडो चुसाईले लाग्थ्यो, ऊ चुस्नमा निकै अनुभवी छे । मैले त्यही भएर सोधिहालेँ “ओई केटी तँ त चुस्नमा एक्सपर्ट छेस् त ?” “तपाईंको डैडीले दिनदिनै आफ्नो लाँडो चुसाउनुहुन्थ्यो त नजानेर भयो ? एकदिन ममीले देख्नुभयो र त्यसपछी सीधा म यहाँ ! डैडीले दिनदिनै लाँडो मात्रै
चुसाउनुहुन्थ्यो, मैले चिक्नको लागि कर गर्दा एकपटक घुमाउन लान्छु र तिन-चार दिनसम्म हनिमुन मनाउँला भन्नुहुन्थ्यो…!!! सब खत्तम …” उसले सहजै सबै कुरा भनि । मैले पनि उसको मुखलाई लाँडोबाट छुटाएर मेरो मुखमा टाँसेर टङ्ग किस लिएँ र भनें “त्यसोभए भोली म तसँग हनिमुन मनाउँछु, आज छोड् भोली तँलाई दुलहीको रुपमा सजाएर तेरो ईच्छा पुरा गरिदिन्छु !” “त्यसोभए म अहिले लाँडोलाई मेरो मुखमा नै झार्छु नि त ? मलाई फुसीको स्वाद असाध्यै मन पर्छ !” “ल! ल! चुस् मेरो लाँडो धित् मरुञ्जेल चुस् !!!” अनि ऊ मेरो ओंठदेखि छाती हुँदै लाँडोसम्म चाट्दै पुगि र लाँडोलाई ग्वाम्लाङ्ग मुखभित्र छिराई जबसम्म उसको घाँटीको जरासम्म मेरो लाँडो पुग्दैन । निकैबेरसम्म उसले मेरो लाँडो चुसी अनि उसले मेरो गेडालाई पनि अति चित्तबुझ्दो तरिकाले मुखले खेलाउँदै चुसी, बेलाबेलामा मैले उसको मुखलाई
आफ्नो मुखमा ल्याएर किस गर्न भ्याउँथे । रीनाले उसको पोका खेलाउँदै घरि-घरि निपल चुसिदिन्थी । निकैबेरको उसको चुसाईपछी म उसको मुखभित्रै झर्न लाग्दा उसले मेरो लाँडो निकाल्नै नदिई मुखभित्रै झर्न आँखाले ईशारा गरी र म खुरुखुरु उसको मुखभित्र झरें, उसले मेरो लाँडोबाट निस्केको फुसी गलप्प गर्दै निलीदिई । उसको आँखामा एकप्रकारको सन्तुष्टी झल्किन्थ्यो भने म पनि आजको दोस्रो स्खलनमा सन्तुष्ट भएको थिए ।
नीतासँग फकडे मनाउने तयारीका लागि रीना र म सपिङ्गमा विहानैदेखि व्यस्त रह्यौं, दिनभर रीनाले मेरो बेडरुम सजाएर बसि अनि नीतालाई व्युटी पार्लर लगेर सिंगारेर ल्याई, म पनि घरमै नुहाइवरी जाँठा सेभ गरीवरी चिटिक्क परेर बसें । बेलुका मैले एउटा केक लिएर आए जसमा लाँडोको आकार चित्रीत थियो र लेखिएको थियो – “फकडे अफ राज एण्ड नीता” । रीना एउटा केमरा फोटोको लागि र अर्को केमरा भिडीयोको लागि सेट गर्न थाली । साँझ निकै राम्री सजिएर नीता मेरो अगाडी आई, म पनि ठाँटिएर बसेको थिंए । रीना भिडियो रेकर्डीङमा राखेर फोटो खिच्न थाली । मैले सोझै नीतालाई अँगालोमा लिएर भनें – “हेप्पी फकडे माई सेक्सी सिस्टर !” उसले पनि मलाई – “सेम टु यु
माई फकिङ ब्रदर ह्याभिङ बिग डिक !” भनि र उसको मुखमा मुख जोडेर हामी लामो टङ किसमा तल्लीन भयौं, लामो किसको दौरानमा मैले उसको सबै कपडा खोलिसकेको थिंए । उसको जिब्रोसँग आफ्नो जिब्रो छुटाएपछी मैले उसलाई केक देखाएँ अनि उसले भनि – “ओ मेरो राजा खानको लागि यो लाँडो अनि चिक्नको लागि यो (मेरो लाँडो समाउँदै) लाँडो, यु आर सो फन्नी फकर…” “ल ल ! पहिला केकको काम सकौं अनि त्यसपछी बाँकी काम गरौंला !” “त्यो भन्दा अगाडी मेरो लाँडे दादाको बोक्रो …” अनि उसले एकपछी अर्को गर्दै मेरो कपडा खोली दिन थाली । जब मेरो लाँडो फनक्क गर्दै उसको अगाडी ठन्किन थाल्यो, उसले मन थाम्न सकिनछ क्यार हत्तपत्त मुखमा राखेर चुस्न थाली । एकछिनसम्म लाँडो चुस्न दिएपछी मैले उसको पोको समाउँदै माथि तानेर पुनः: टङ किस दिन थालें र त्यत्तिकै उसलाई टेबुलमाथि सुताइ
दिएँ । त्यसपछि केकको लाँडो उसको पुती फट्टाएर ठोसि दिएँ, बाँकीलाई उसको पोकामा दलि दिएँ र भनें “नीता, मेरी सेक्सी बहिनी आज तँलाई म केटीबाट आइमाई बनाउँछु, तेरो पुतीलाई आज मेरो लाँडोले फक्र्याउछुँ ।” अनि उसको पुतीमा आफ्नो मुख दलेर केकलाई चाटे, केही केक मुखमै बाँकी राखेर उसको मुखमा मुख जोडेर उसलाई पनि खुवाएँ, यहि क्रमले मैले उसको पुती र पोकामा भएको सबै केक चाटेर उसलाई पनि चखाएँ । उसको ज्यानमा भएको केक सफाचट भएपछि मैले केकमा आफ्नो लाँडो चोपेर उसको मुखमा सोझ्याएँ । नीताले मेरो लाँडो चुस्दै मलाई पनि चखाउँदै सफा गरी ।
नीतालाई मैले किस गर्दै जुरुक्क उचालें र बेडमा पुर्याएँ । नीता र म दुवै पूर्णरुपमा नाङ्गै थियौं । मैले नीतालाई सुस्तरी पलङ्ग तिर सुताए र एउटा हातको औलाले नीताको पुती भित्र छिराए । एउटा औला छिराउँदा त नीताको पुती आगोको भटटी सरह तातो न तातो र गिलो भैसकेको थियो । सुस्तरी मैले मेरा औला भित्र बाहिरमात्र के गरेको थिए उ लामो लामो सास तान्न थाली र बरबराउन थाली ”उफ…आ…आ….उउउउउ….” मलाई नीताको त्यो आवाजले अझ जोस आयो र मुखले नीताको दुधको मुन्टा चुस्दै औलाले नीताको पुतीमा भित्र बाहिर अझ जोड जोडले गर्न थाले र एक छिन पछि दुई वटा औला भित्र हाल्न थाले । त्यतिकैमा उ आफनो चाक जोडले उचाली उचाली र पहिलाको
भन्दा ठुलो स्वरमा आवाज निकाल्न थालि ”आ…..आ…….मेरो राजा……. मेरो दाई अब सहन सक्दिन………छिराईदिनुतपाइको त्यो….. ठन्केको लाँडो … फुटाइदिनु मेरो कुमारित्व आ…उउउउउ….” नीताले आफनो एउटा हातले मेरो लाँडो पनि तल माथि तल माथि गर्दै थिई । जसो जसो मेरो औलाको स्पिड बडदै थियो नीताको हातको कसाई र तल माथि गर्ने स्पीड पनि बढ्दै थियो । कता कता मलाई मेरो आफनै माल झर्न लागे जस्तो लाग्यो, त्यसैले मैले नीताको हातबाट आफनो लाडोलाई हटाई सुस्तरी नीताको खुटटा फटयाएर नीताको पुती माथी राखी दिए र सुस्तरी नीताको पुतीको माथिल्लो भागमा रगड्न थाले । उसको पुतीबाट निकै चिप्लो पदार्थ बाहिर निस्कदैथ्यो ।
अब उ झन लामो लामो सास लिन थाली, मैले सुस्तरी मेरो लाँडोको टुप्पोनीताको पुतीमा राखेर सुस्तरी धक्का के दिन थाले उत चिल्लाउन थाली जबकि अहिले थोरै ईन्ची जती मात्र भित्र पसेको थियो । मेरो लाडोको आकार ८ ईन्च भन्दा लामो र झण्डै ३ ईन्च मोटो छ । र फेरी मैले सुस्तरी त्यतिकैमा भित्र बाहिर गर्दै पुन छिराउने प्रयत्न गरें । अब भने अझै केही भित्र पस्यो होला उ त ”अईया….. आमा…….दुख्यो…… दाइ… मेरो पुती…..यति अलि विस्तारै …. विस्तारै पसाउनु है राजा” भन्न थाली । मैले पनि “ल ल ! पहिलो पटक यस्तै हुन्छ, एकछिन पछि मजा आउँछ र तै अझै भित्र छिरा भन्न थाल्छेस् ।” भन्दै एक छिन शान्त बसेर पुन भित्र बाहिर गर्न थाले भने उ भने आखा चिम्म गरेर ओठ
टोक्दै थिई । २-३ मिनटसम्म पुतीको बाहिरी भागमै लाँडो रगड्दै पुन जोडले धक्का दिए र आफनो मुख नीताको ओठमा राखी किस गर्न थाले । उ त अईया पनि भन्न पाईन , मेरो लाडो पुरै नीताको पुतीमा पस्यो । उसको पूतीबाट हल्का रगत बाहिर निस्कन थाल्यो । ऊ पोल्यो भन्दैथिई, म भने “ल ल ! एकछिन सहन गर् अनि …” भन्दै ल्वाम ल्वाम चिक्न थाले भने उ पनि एक छिनको दुखाई पछि चुपचाप मलाई साथ दिन थाली । नीताले मलाई पुरा साथ दिन थाली, तलबाट पुरा धक्का मार्दै थिई भने म नीताको दुबै खुटटालाई हातले च्यातेर पुरा बल लगाउदै चिक्दै थिए । करिब १० मिनटको चिकाई पछि नीताको स्पीड बढ्न थाल्यो र मैले नीताको खुटटा छोडी नीतालाई किस गर्दै तलबाट
पहिलाको भन्दा बडि जोड जोडले धक्का दिन थाले । “उफ मेरो राजा……..आ.आ…आ……….अरु जोडले ……..आ….अरु जोडले…..मेरो राजा” नीता कराउन थाली । अब नीताको हातको नङग्राले मेरो ढाड र करङ्गमा चिथोर्न थाली । मेरो पनि स्पीड बढ्न थाल्यो र मैले एउटा हातले आफनो लाँडो नीताको पुतीबाट फुत्त बाहिर निकालेर नीताको पोकामाथि सबै फुसी झारिदिंए र नीतालाई पुरा किस गर्दै चाटन थाले । उ पनि मलाई पुरै तिर चाटन थाली । एक छिन सम्म हामि टासिएरै बस्यौ । म पुरै पसिना पसिना भै सकेको थिए भने उनि पनि पसिना पसिना भै
सकेकी थिईन । “ल ! आजबाट त केटी होइन तरुनी आइमाई भइस् ! आजबाट तँ मेरो पर्सनल रण्डी । हेप्पी फकिङ माई सिस्टर ।” ऊ मख्ख पर्दै मेरो मुखमा आफ्नो मुख जोडेर किस गर्न थाली, मैले पनि उसको पोकामा हात पुर्*याएर निचोर्न थालें “यति मजा हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए त म डेडीलाई उहिल्यै हनिमुन मनाउन जाउँ भनेर जबरजस्ती नै गर्थे नि?” “ठिकै भयो नि त, तेरो फ्रेश पुती मेरो भागमा आयो नि त ! अब मिल्यो भने डेडी र म मिलेर तँलाई एकै पटक अगाडी पछाडिबाट चिकम्ला नि त?” त्यसपछी मैले उसलाई आफ्नो काखमा उठाएँ र बाथरुम पुर्*याँए ।
निशान भट्टराईको स्वरमा ‘कोरेर मीठा भावहरु’ (भिडियोसहित)
होलीमा खेलीने रङहरुले कस्तो असर पर्दछ ?
February 26, 2018 editor> 0
बिहे गरेको लगभग ४ बर्ष पुरा हुनै लाग्यो। यो ४ बर्षमा मलाई श्रीमानले कहिल्ल्यै सन्तुष्टी दिन सक्नुभएन तर एक दिनको कुरा हो मेरो श्रीमान् अफिसको कामले बाहिर जानु भएको थियो। घरमा सासु, ससुरा, देवर र म मात्रै थियौं साझंको बेला खाना साना खाएर हामी सबै सुत्न आ-आफ्नो कोठामा गयौं। कोठामा पुगेर बत्ति बाल्न खोज्दा बत्ति नै बलेन त्यसपछी मैले देवर लाई बोलाएँ। बाबु बाबु हेर्नु न मेरो रुमको बत्ति नै बलेन ए होर रोक्नु म आइहालें (बाबुले बत्ति हेर्दै हुनुहुन्थ्यो) भाउजु यो बत्तिको त फ्युज गएछ अब यसले काम गर्दैन अर्को फेर्नु पर्छ ए यो रातिमा कहाँ लिन जानु दराज माथि छ कि म हेर्छु है त म बत्ति हेर्न कुर्ची माथि के चढ्न लागेकी थिएँ त्यत्तिकैमा कुर्चिबाट चिप्लिएर भुइँमा लडें बाबु हतारिदै आउनुभयो के भो भाउजु कतै लाग्न त लागेन म ऐया ऐया भन्दै खुट्टा समाइरहेकि थिएँ बाबु आफ्नो कोठामा गएर मालिस गर्ने मल्हम लिएर आउनुभयो अनि खै हात हटाउनु त म मालिस गर्दिन्छु भर्खरै ठिक हुन्छ भन्दै खुट्टामा मालिस गर्न लाग्नुभयो सुरुमा बाबुले खुट्टामा मालिस गर्दा साह्रै अफ्ठेरो लाग्यो पछी अलि ठिक भए जस्तो भयो मैले सुरवाल अलिकति माथि सार्दिएँ बाबुले पनि हात माथि माथि सर्दै ल्याउनुभयो त्यसपछि त शरीर भरि काँडा निस्किन थाले अनि मैले कुर्ता माथि उठाएर पेटमा पनि दुखेको इसारा गरें बाबुले पनि कुरो बुझेर खुट्टातिर बाट सरेर पेटमा मालिस गर्न थाल्नु भयो अब बाँकी कथा बाबुबाट …….. त्यस पछि भाउजुले खाटमा बसी मेरो ट्राउजर र पेन्टी तल सारेर मेरो लिङ्ग खेलाउन थाल्नु भयो र हाँस्दै भन्नु भयो “बाबु तपाईलाई केही थाहा नभए पनि यसलाई ( मेरो लिङ्ग) त सबै थाहा भेसकेछ त, यो त सेक्स गर्न तयार भएछ त”। मेरो लिङ्ग पहिला नै ठन्किसकेको भाउजुले चलाएपछि रन्किएर कडा झन भयो । अनि भाउजु खाटमा उत्तानो परेर सुती आफ्नो सुरवाल खोलेर कुर्तालाई माथी तिर फर्काउनु भयो । भाउजूले भर्खर नुहाउनु भएकोले प्यान्टी पनि लगाउनु भएको थिएन यसैले भाउजुको बाक्लो रऔंले ढाकेको योनी देखिईहाल्यो । भाउजुले मलाई उहाँको योनी खेलाउन भन्नु भयो, अनि मैले ट्राउजर फुकाली खाटमा चढेर भाउजुको योनी खेलाउन र योनी भित्र औंला पसाउन थाले । एकछिन खेलाएपछि भाउजुको योनी रसाउन थाल्यो । त्यसपछि भाउजुले आफ्नो खुट्टा फट्याउदै मलाई उहाँ माथि चढ्न भन्नु भयो । म भाउजु माथि चढे अनि भाउजुले मेरो लिङ्ग समाएर आफ्नो योनी च्यात्दै अलिकति पसाउनु भयो र मलाई भित्र घुसाउन भन्नु भयो । मैले लिङ्गलाई भित्र तिर ठेले तर छिरेन अनि अलि बल लागाएर ठेलें भाउजुको योनीमा पानी आएर चिप्लो भइसकेकोले मेरो लिङ्ग एकैपटक भाउजुको योनी भित्र पुग्यो, तब भाउजु चिच्याउनु भयो मेरो योनी नै च्यातिदिने बिचार छ कि के हो?” म डराउँदै लिङ्गलाई बाहिर निकाल्न खोजे तर भाउजुले मलाई भन्नु भयो “बाहिर न निकाल्नुस, अब भित्र बाहिर गर्नुसन तर बिस्तारै गर्नुस ल, तपाईको हतियार ठुलो रहेछ ।” म मेरो लिङ्गलाई भाउजुको योनीको भित्र बाहिर गर्दै भाउजु माथि मच्चिइन लागें । केहि समय मच्चिए पछि मेरो लिङ्गमा अनौठो अनुभव हुन थाल्यो र मेरो लिङ्गले भाउजुको योनी भित्र पिच्कारी मारीदियो । अनि म एकछिन भाउजु माथि नै सुतिरहे । केहीबेर पछि भाउजुले मलाई हटाउँदै भन्नु भयो “कस्तो लाग्यो त?” मेलै भने धेरै मज्जा भयो भाउजु तर मलाई फेरी एक पटक गर्न मन लागिराछ । भाउजुले हास्दै ओहो बल्ल ठुलो हुन थाल्नु भएछ मेरो बाबु भन्दै मेरो लिङ्गलाई फेरी खेलाउन थाल्नु भयो । भाउजुले केही समय खेलाएपछि मेरो हतियार फेरी लड्नको लागि तयार भयो । अब भाउजुले मलाई उत्तानो परेर सुत्न भन्नु भयो । अनि मेरो लिङ्ग समाई आफ्नो योनीमा छिराऊँदै म माथि बस्नु भयो । भाउजुको योनी पहिले देखी नै चिप्लो भएकोले मेरो लिङ्ग सजिलै भित्र छिर्यो । त्यसपछि भाउजु मच्चिन लाग्नु भयो, म चाही कुर्ताबाट हात छिराएर भाउजुको स्तन खेलाउन लागे । केही समय मच्छिए पछि भाउजु म थाके भन्दै उठ्नु भयो । अनि भाउजु खाटबाट तल झरी भित्तामा आढेश लाग्दै अब यसरी उठेरै गरौं भन्नु भयो । म पनि खाटबाट झरेर भाउजुको कुर्ता फर्काउन थाले तर भाउजुले अरे बुद्धु यो नै खोल्नुहोस न भन्दै आफ्नो कुर्ता खोल्नु भयो । अब मेरो अगाडी भाउजु पुरै नाङ्गै हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले मेरो लिङ्ग समाती भाउजुको योनीलाई च्यातेर भित्र छिराएर उभिएरै सेक्स गर्न थाले । केही बेरको सहबास पछि मैले फेरी भाउजुको योनी भित्रै विर्यपात गरि दिए । त्यसपछि हामी दुबैले एउटा कपडाले आ-आफ्नो यौनाङ्ग सफा गर्यौ । अनि भाउजुले कुर्ता लगाउनु भयो र बाहिर गएर कपडा धुन थाल्नु भयो । म पनि कपडा लगाएर भाउजु नजिक गई गफ गर्न लागें । त्यस दिन पछि अहिले सम्म मैले भाउजुलाई धेरै पटक सहबास गरिसकें । हाम्रो घरमा धेरै जना हुनाले प्राय समय नमिले पनि हामी समय मिल्ने बितिक्कै यौनको खेल खेल्न शुरु गरी हाल्छौं।
बिहे गरेको लगभग ४ बर्ष पुरा हुनै लाग्यो। यो ४ बर्षमा मलाई श्रीमानले कहिल्ल्यै सन्तुष्टी दिन...
December 6, 2017 admin> 0
यस वेबसाईटमा पोस्ट हुने सम्पूर्ण कथा तथा बिषयवस्तु कल्पनिक हुन् , कुनै पेसा , मान्छे ,...